Ciidamo ka tirsan Nabad sugida Kenya oo Xildhibaano ka tirsan barlamaanka Somalia ka qaatey documents iyo laptops ay wateen hotel ku yaala magaalada Nairobi – idalenews.com
Ciidamo ka tirsan Nabad sugida Kenya oo Xildhibaano ka tirsan barlamaanka Somalia ka qaatey documents iyo laptops ay wateen hotel ku yaala magaalada Nairobi
Xildhibaano ka tirsan Baarlamaanka ayaa caawa Hotelka Sarena ee magaalada Nairobi looga qaatay Documentiyo, Baasaboor iyo Laptop, kadib markii Ciidamo ka tirsan Nabadsugida Kenya ay Hotelka ugu soo galeen.
Sida ay sheegayaan wararka Xildhibaan C/raxmaan Xoosh Jibriil ayaa la sheegay in Ciidamo uu watay Taliye kuxigeenka Nabadsugida Kenya oo ah wiil uu dhalay Wasiirkii hore ee Gaashaandhiga Kenya Yuusuf Xaaji ay ka qaateen Documentiyo, Laptop iyo Baasaboorkiisa, iyagoo sidoo kale qaatay laptop Xildhibaan C/llaahi Goodax Barre oo xilliga laga qaadanayay Laptop-ka aanu goobta joogin.
Wararka ayaa sheegaya in arrintan ay la xiriirto kadib markii maalmo ka hor kulan ka dhacay Nairobi oo ay soo agaasimeen Xildhibaano ka tirsan Baarlamaanka sida C/raxmaan Xoosh Jibriil, C/llaahi Goodax Barre iyo Xuseen Carab Ciise ay kaga hadleen arrimaha maamul u sameynta Jubooyinka iyo maamuladii la sameeyay in aan hab sharci ah oo dastuurka waafaqsa aan loo marin.
Arrintan ayaa durba sii xoojisay xiisada siyaasadeed ee beryahan ka dhex taagneyd dowladda Soomaaliya iyo Kenya oo dhowaan isku khilaafay arrimaha Jubooyinka, waxaana soo baxaya warar sheegaya in Kenya ay dooneyso inay Nairobi ka ceyriso Xildhibaanadii maalin ka hor shirka ku qabtay ee ka soo horjeestay maamul u sameynta Jubooyinka.
Tallaabadan ay sameeyeen Ciidamada nabadsugida Kenya ayaa imaaneysa, iyadoo lagu wado in Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh oo caawa ka soo ambabaxaya London uu ku soo fool leeyahay Nairobi, sida qorshuhu yahay balamo kula ley Beesha Caalamka, lamana oga in arrintan dhacday ay wax ka bedeli doonto imaanshihiisa.
Madaxweynaha Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh oo aysan u suurtogalin ka qeybgalka shirka Irland ee G8. soona gaarey Nairobi
Madaafiic Xalay lagu weerarey xarunta Madaxtooyada Villa Somalia